Daawo muuqaalka: maamulka Puntland oo Jeneraal Cade Muuse ku tilmaantay Dagaal ooge. |
Daawo muuqaalka: maamulka Puntland oo Jeneraal Cade Muuse ku tilmaantay Dagaal ooge.
Wasiirka Warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir oo Shir saxaafadeed ku qabtay Magaalada Garoowe wuxuu sheegay in Gen, Cade Muuse Xirsi oo ahaa Madaxweynihii hore ee Puntland uu Qalalaaso iyo dhibaato horleh uu ka abuurayo Deegaanada Puntland isagoo kasoo horjeeda Nidaamka Xisbiyada Badan ee ka socda Deegaanada Puntland iyo Hormarka Baahsan ee la gaaray oo uusan isago hormuud ka ahayn.
Wasiirku wuxuu sheegay in Puntland ay ka digeyso dhaq-dhaqaaqyada dal dumiska ah ee uu ka shaqeynayo Cade Muuse iyadoo shacabka reer Puntlandna ugu baaqeyso Midnimo iyo Isku duubni wuxuu kaloo sheegay wasiirku in Shacabka looga baahanyahay ka hortaga wixii dhib ku ah Umada Puntland.
Hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhawaan Gen cade muuse hadal uu kasoo jeediyay Magaalada Qardho uu ku sheegay in Puntland aysan ka dhici Karin Doorasho arimahaasna hawlo gaar ah laga leeyahay isagoo baaq u diray wax garadka aqoonyahanada iyo isimada Puntland si ay isgu yimaadaan shir wadatashi.
Halkaan hoose ka daawo warbixintaani oo dhan.